Markuu Kev Adams si macaan u dhigay saaxiibkiisii ​​hore Iris Mittenaere ee Maskaxarka Maska - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Markuu Kev Adams si macaan u dhigay saaxiibkiisii ​​hore Iris Mittenaere ee Maskaxarka Maska
"Ma ka ogtahay waxa ku jira Miss Kev?" Jimcihii Noofembar 8, Baarayaasha Maskaxleyda Maska ayaa waxay isku dayeen inay ogaadaan kuwa ahaa shakhsiyaadka qarsoon ee showga cusub ee TF1. Dadaalo badan iyo tusaalooyin lagu beeray sifeyn taxadar leh, Alessandra Sublet, Adams, Anggun et Jarry waxay isku dayeen inay khalkhal geliyaan argagaxa ... Si aan waxtar lahayn Runtii, haddii midkoodna uusan qiyaasi karin inuu helo Marie-Jose Pérec maaskaradan, waxay soo saareen fiidnimadii oo dhan dhowr aragtiyood oo kala ah, laga bilaabo Carla Bruni illaa Adriana Karembeu oo loo maro Sonia Rolland iyo ... Iris Mittenaere !
Fuulay fiidkii ilaa Isku Duubka Camille laakiin sidoo kale Jarry, xiriirkiisii ​​hore ee Miss Universe 2016, Adams waxay kaloo adeegsadeen fursad kasta oo ay dib ugulaabsadaan si kaftan ah oo ay hawada uga saaraan wax aan jirin Iris Mittenaere. "Haddii ay tahay Julie Gayet ama Carla Bruni, waxaan ku jiraa guryo la daadinayo haddii aad wax ka qaban karto ..." si fiican ayey u bilaabaysaa Jarrykahor Aktarka Soda daah fur la'aan: "Hadday tahay Iris Mittenaere, sidoo kale waxaan ku jiraa garoon diyaarad sidaa darteed ..." Taasina waa wanaagsan tahay, tii hore ee Faransiiska oo dhowaan soo degtay guri cusub.
Aniga marka Jarry yiraahdo "Iris Mittenaere" pic.twitter.com/TFRRnofL3S
- Kev Adams (@kevadamsss) November 8, 2019
Haddii muddo ku dhow hal sano Adams et Iris Mittenaere Waxay xiriirkooda qarsoodi ka dhigteen, hadda wixii ka dambeeya, majaajiluhu ma sii qarsanayo, mana ka labalabeeyo inuu ka hadlo arrintan xiriirka hore ee bandhigyadiisa. Oo isagu had iyo jeer ereyo aad u naxariis badans loogu talagalay saaxiibtiisii ​​hore, oo jacayl ka dhex heshay gacmaha Diego el Glaoui. "Ka bixitaanka Miss Universe 2016 waxay ahayd noloshayda maalinlaha ah ku dhawaad ​​hal sano [...] Weli maanta, waxaan leenahay xiriir aad u qurux badan, wali jacayl badan ayaan u hayaa iyada" ayuu qirtay. Kadib ku dar: "Ka hadalka iyada masraxa, waxay sidoo kale ahayd dariiqa aan ka dhigo in aan fahmo in aan aad ugu faraxsanahay in aan la joogo gabar sida iyada oo kale ah", ayuu ku sharaxay tiirarka Paris Match bishii oktoobar.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/quand-kev-adams-vanne-son-ex-compagne-iris-mittenaere-dans-mask-singer-1046815
Algeria: Toban waxyaabood oo ay tahay in wax laga ogaado Mohamed Charfi, Madaxweynaha awooda doorashada - JeuneAfrique.com
"South Terminal", muraayadda sanadihii madoobaa ee Algeria - JeuneAfrique.com
Tuniisiya - Chawki Tabib: "La-dagaallanka musuqmaasuqa waa mudnaan sare" - JeuneAfrique.com
Yoann Lhonneur (La-talinta Devlhon): "Waa inaan dib u dhiska laamaha baanka ku leh Afka Faransiiska ku hadla ee Faransiiska" - JeuneAfrique.com
Hooyo 3 hooyadeed waxay lumisay 80 Kg sanad gudeheeda iyadoo aan galin jimicsiga - SANTE PLUS MAG